Elder Villa 1 - I-Airbnb
Burleigh Heads, Queensland, i-Australia
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Yvonne
Ibekwe komunye wemigwaqo efiseleka kakhulu eBurleigh Heads, le villa enamakamelo ama-2 ebanzi ilungele labo abafuna izindawo zikanokusho nezakhiwe ngokufudumala, ubumfihlo kanye nokuthintwa komuntu siqu kwekhaya.
Ihlinzekela abantu abangafika kwabane, lo mbono wendawo yokuhlala usetshenziswe kahle ngokunaka okungenasici emininingwaneni, i-or-trend decor, imisebenzi yobuciko bespoke, impahla ethambile nokufakwa kokukhanya ngokwezifiso kulo lonke.
Sesikhathele ukukwamukela kwenye yezakhiwo ze-The Halliday.
Izungezwe izingadi zasezindaweni ezishisayo, indawo yokuphumula epholile egcwele ukukhanya ye-Villa One kanye nendawo yokudlela ivuleleka phezu kwedekhi kanye nechibi lokucwila lamaminerali e-Ozone, lapho izivakashi zingaphumuza khona zodwa futhi zijabulele isimo sezulu esiseningizimu yeGold Coast.
Ikhishi elibekwe kahle linakho konke okudingwa yizivakashi ukuze zizihlinzekele ngesikhathi sokuhlala kwazo kanye nomshini wekhofi we-Nespresso nezinto zikagesi ze-Smeg.
Ngobusuku obupholile basebusika, kukhona indawo yomlilo egumbini lokuphumula, kanye nebhavu likakhonkolo langaphandle elenziwe ngezandla elibekwe engadini ethule ukuze kufakwe isikhathi eside kanokusho ngaphansi kwezinkanyezi.
Phezulu, i-master suite inombhede olingana inkosi (ongase ube imibhede emibili futhi) kanye ne-ensuite enhle enezinsiza zika-Kevin Murphy, i-tapwear enhle, amathayela aseMoroccan kanye nesitsha sikakhonkolo.
Igumbi lesibili lokulala nalo linombhede ongangenkosi, ongahlukaniswa kabili ukuze uhambisane nezidingo zezivakashi.
Ibhishi elisezingeni lomhlaba laseBurleigh, izindawo zokudlela, imigoqo kanye nezitolo zokudlela ziwuhambo olufushane nje ukusuka eVilla One. Noma, khetha ukuphila njengendawo yasendaweni enganakile bese uphuma uyohlola elinye lamabhayisikili e-cruiser cruiser.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$1417.
Hlola ezinye izinketho ezise- Burleigh Heads namaphethelo